Bitcoin, chii zvazviri, kuti inoshanda sei uye kupi yekutenga Bitcoins | Gadget nhau
Bitcoin, chii icho, inoshanda sei uye kupi yekutenga Bitcoins
Isu tanga tichinzwa nezveBitcoins kwemakore akati wandei, kwete chete munhau, asiwo paterevhizheni akateedzana. Dambudziko nderekuti muzviitiko zvakawanda, kunyanya mumaterevhizheni, Izvo chaizvo Bitcoins uye zvatingaite navo zvakatsauswa. Bitcoin imari chaiyo Iyo haina kudzorwa nechero ipi mvumo muviri, haina kuchengetwa mumabhangi, haigone kuteverwa uye pazviitiko zvakawanda, kunyanya mumazuva ayo ekutanga, yanga ichibatanidzwa nezviitwa zvisiri pamutemo zvine chekuita nekutengesa zvinodhaka uye zvombo (Silk Road inonzwika inozivikanwa kwatiri tese). Asi kana tikachera zvakadzama mune izvo chaizvo mari iyi nyowani, tinogona kuona kuti inogona kuve, mune iri kure kure remangwana, mari inoshandiswa nevashandisi.
Uye zvakare, Bitcoin yakatambura nekuwedzera kunoshamisa mumutengo wayo, ndosaka wave mukana wakakura wekudyara kune avo vanoda kuwana kudzoka kwakakosha pamari yavo. € 5.000, € 10.000, € 200.000, ... kune vamwe kunyange nyanzvi muchikamu vanofungidzira ramangwana kupi Bitcoin inogona kukosha mamirioni euros. Tatarisana nezvakadai, vanhu vazhinji vari kupinda mumusika weBitcoin sevatengesi.
Unoda here invest in Bitcoin? Tinokupa iwe $ 10 YEMAHARA muBitcoin nekudzvanya pano
1 Chii chinonzi Bitcoin?
2 Ndiani akasika iyo Bitcoin?
3 Yakawanda zvakadii Bitcoin kukosha?
4 Ndekupi kwandinogona kutenga Bitcoins?
5 Nzira yekuchera sei Bitcoins
6 Ndiani anodzora Bitcoins?
7 Kubatsira kweBitcoins
8 Kukanganisa kweBitcoins
Sezvandataura pamusoro, Bitcoin imari yedhijitari, haina manotsi kana mari yepanyama yekuitisa zviitiko. Bitcoins inochengetwa mumachira chaiwo kubva patinogona kubhadhara ipapo ipapo pamusoro peinternet. Kusiya kushandiswa kwese kwese kwaive kwakabatana nako, parizvino Microsoft, iyo Steam yemitambo yemitambo, makasino eLas Vegas uye kunyangwe zvikwata zveNBA zvebhasikiti zvinogamuchira mari iyi yedhijitari senzira yekubhadhara, asi havazi ivo chete kubva kuwanda kwemabhizinesi uye makambani makuru ari kutanga kufarira kushandiswa kwemari iyi ari kuwedzera.
Tora $ 10 YEMAHARA muBitcoin nekudzvanya apa
Muchidimbu tinogona kutaura izvozvo Bitcoin yakazara mari yedhijitari, yakatemerwa uye inoshandiswa nevashandisi. Nekuda kwekushomeka kweruzivo pamusoro pemari nyowani iyi isingadzorwe nesangano rezvemari, dzimwe nyika dzakatanga kuvharira mawebhusaiti anotendera mashandiro nemari iyi, seRussia, Vietnam, Indonesia. Zvisinei, dzimwe nyika dzakadai seUnited States neBrazil dzinotopa maATM kwatinogona kutenga Bitcoins zvakananga nekuvabatanidza nehombodo yedu.
Kune mamwe ma cryptocurrencies akadai saEther, Litecoin uye Ripple asi chokwadi ndechekuti Bitcoin nhasi ndiyo chete cryptocurrency ine kukosha uye kuyerwa pasirese.
Ndiani akasika iyo Bitcoin?
Kunyangwe pasina humbowo chaihwo hwekuti ndiani akagadzira, most tracks tracks Satoshi Nakamoto muna 2009, kunyange zvazvo mazano ekutanga ekugadzira mari yakadzika uye isingazivikanwi yakawanikwa muna 1998, pane tsamba yekutumira yakagadzirwa na Wei Dai. Satishi akaitisa bvunzo dzekutanga dzekushanda kwepfungwa yeBitcoin pane tsamba yekutumira kuyunivhesiti yake, kunyangwe achangosiya chirongwa ichi, achisiya gungwa rekusahadzika uye zvichikonzera kushomeka kwekunzwisisa nezve yakavhurwa sosi iyo Bitcoin yakavakirwa uye chaicho chinoshandiswa.
Muna 2016, wekuAustralia Craig Wright, akataura kuti ndiye akagadzira mari yedhijitari padivi paDave Kleiman (akashaya muna2013) achitaura kuti zita raSatoshi Nakamoto raive renhema uye rakagadzirwa nevaviri kuti vavanze vasingazivikanwe. Craig akaunza akateedzana emakiyi epachivande ane chekuita nemari dzekutanga dzakagadzirwa naNakamoto, asi zvinoita sekunge ruzivo rwaakaratidza kuratidza kuti ndiye musiki rwanga rusina kukwana uye parizvino zita remusiki weBitcoins richiri mumhepo .
Yakawanda zvakadii Bitcoin kukosha?
Mugore rapfuura, mutengo weBitcoin wakakwira mazana mashanu muzana, uye panguva yekunyora chinyorwa ichi, mutengo weBitcoin uri pamadhora mazana maviri nemazana matatu. Kunyangwe hazvo kukura kuri kuita mari mumakore achangopfuura, vazhinji vachiri vasina chokwadi kana vachiisa mari mune iri mari yemadhijitari, ndichiitora senge yehungwaru mhedzisiro iyo inokurumidza kana kuti gare gare inoputika, ichitora mari yevashandisi vese vakaisa nguva nemari mari iyi.
Iwe unoda kuisa mari muBitcoin?
Dzvanya HERE kutenga Bitcoin
Imwe poindi mukufarira kwayo ndeyekuti hazvitsamiri pane chero muviri unozvidzora uye unogona kuzvidzora, Saka kuti ivo chete vashandisi nevashandi vemumigodhi, pamwe chete nenhamba yekuita kunoitwa zuva nezuva-zuva, izvo zvinogona kukanganisa kukwira kana kuderera kwemutengo wavo. Izvo zvakasiyana zvinoshandiswa kana mapeji ewebhu anotibvumidza kutenga nekutengesa Bitcoins anotipa iyo quote panguva chaiyo yatinoda kuita kutengeserana kuitira kuti tizive nguva dzese huwandu hweBitcoins iyo yatiri kuzowana. Kana iwe uchida kutenga Bitcoins, kurudziro yedu ndeyekuti iwe ushandise yakasimba uye yakachengeteka chikuva senge Coinbase. Dzvanya apa kuvhura account neCoinbase uye utenge yako yekutanga Bitcoins.
Ndekupi kwandinogona kutenga Bitcoins?
Kunyangwe kukosha kweBitcoins kuchinge kwakasiyana zvakanyanya pamusoro pegore, nekuwedzera uye nekuwedzera vashandisi vanofarira kuisa mari mune ino cryptocurrency. Parizvino paInternet tinogona kuwana nhamba hombe yemapeji ewebhu anotibvumidza isu kuisa mari muBitcoins. Asi pakati pevose vatinogona kuwana, mazhinji acho anongoda kuchengeta mari yedu pasina kupa chero chinhu kudzosa, isu tinosimbisa Coinbase, imwe yekutanga kubheja pane ino isiri-yepakati uye isingazivikanwe mari ingangoita kubva pakutanga.
Kuti uwane tenga Bitcoins kuburikidza neCoinbase isu tinofanira dhawunirodha iwo akasiyana maficha eese anoshanda system: iOS kana Android. Kana tangonyoresa uye nekuzadzisa mashoma mashoma ekuongorora matanho, tinozadza ruzivo rwedu kubhengi uye tinokwanisa kutanga kutenga Bitcoins, Bitcoins iyo inochengetwa muchikwama chinotipiwa nebasa iri, kubva kwatinogona kubhadhara kune vamwe vashandisi mune izvi. mari kana kungozvichengeta kudzamara mutengo wemusika wavo wakakwirira kupfuura iyezvino.
Usafunge kaviri uye uwane $ 10 YEMAHARA muBitcoin nekudzvanya apa
Mukushandisa kumwe chete tinogona kukurumidza kuwana kukosha kweBitcoin panguva yekutenga kana kutengesa, kuitira kuti tirege kuve nekudiwa kwekutarisa mamwe mapeji ewebhu tisati taita maitiro acho. Semutemo wenguva dzose, kukosha kweBitcoin kunoratidzwa mumadhora, saka zvinokurudzirwa kutenga mari iyi mumadhora uye kwete mumaeuro, zvikasadaro tinoda kurasikirwa nemari neshanduko dzakaitwa nebhangi kuti vaite kutengeserana.
Nzira yekuchera sei Bitcoins
Kuti utange kuisa musoro wako munyika yeBitcoins iwe unoda kutanga pane zvese internet kubatana, komputa ine simba uye chaiyo software. Mumusika tinogona kuwana maforogo akasiyana eakavhurwa sosi application anoshandiswa kuwana Bitcoins, zvese zvinoenderana nekuti ndeipi inonyatsoenderana nezvaunoda. Maitiro ekuchera maBitcoins ari nyore, sezvo timu yako iri kutarisira, pamwe nezviuru zvemamwe makomputa, kugadzirisa mashandisirwo anoitwa mumusika uye nekudzosa unganidza Bitcoins. Zviripachena zvikwata zvakawandisa zvaunoshanda zvinowedzera maBitcoins aunogona kuwana, kunyangwe zvisiri zvinhu zvese zvakanaka sekutaridzika kwazvinoita.
Kana paine kukwikwidza kwakawanda, mikana yekuti timu yako ishandiswe kuita mutengapwe inoderera saka mwero webatsiro wakadzikira. Hapana munhu anogona kudzora system kuwedzera mari yeBitcoins, chinhu chete chingaitwe kugadzira mapurazi ane huwandu hukuru hwemakomputa akabatana netiweki, iyozve inosanganisira mutengo wakakosha wechiedza, kusingaverengerwa mutengo wemidziyo, iyo inofanira kunge iine simba kwazvo.
Iko kumhanya kwavakagadzirwa kunoderedzwa sezvo maBitcoins anoburitswa, kusvikira huwandu hwemamiriyoni makumi maviri nerimwe hwasvika, panguva iyo hapasisina mari yemagetsi yerudzi urwu inogona kugadzirwa. Asi kuti usvike iyo huwandu kuchine nguva yakareba yekuenda.
Imwe sarudzo yekuchera yangu bitcoins nenzira iri nyore zvikuru kubvarura system ye Bitcoins gore rekuchera.
Ndiani anodzora Bitcoins?
Dambudziko rinomiririrwa neBitcoins kune nyika nemabhangi makuru nderekuti hapana chinzvimbo chiri kutarisira kudzora zvese zvine chekuita nemari iyi, chimwe chinhu chiri pachena hachivaitise kuseka, kunyanya kwenguva muchikamu chino uko Bitcoin iri kutanga kuve mari yakafanana, kunyangwe kuchine makore akawanda ekuenda isati iri imwe nzira chaiyo.
Coinbase, Blockchain.info uye BitStamp ndivo vari kutarisira kupa zvivakwa zveBitcoin, maNode anoshandira purofiti, saka vanogara vachifamba nekuda kwavo, chero munhu anovapa mari zhinji, asi havazi ivo vanovaisa mukutenderera, iro basa rinowira kune vacheri, vanhu vanoonga software chaiyo uye simba rekomputa yako / s rinogona kuenda kumigodhi nekuwana Bitcoins.
ChengetedzoSezvo vashandisi vaine kutonga kwakazara pane zvese zvavanoita, hapana munhu anogona kubhadharisa account senge makadhi echikwereti kana kutarisa maakaunzi anogona.
Transparent. Ruzivo rwese rwakanangana neBitcoins rwuripo pachena kubudikidza nema blockchains, registry uko ruzivo rwese rwakanangana nemari iyi ruripo, registry isingagadziriswe kana kushandisirwa.
Makomisheni haapo. Mabhangi anorarama nemakomisheni aanotibhadharira kuwedzera pakutamba nemari yedu. Kubhadhara kwatinoita neBitcoins, kazhinji kacho mahara zvachose sezvo pasina murevereri wekuzviita, kunyangwe dzimwe nguva, zvichienderana nerudzi rwebasa ratiri kuda kubhadhara, imwe komisheni inogona kuiswa, asi mune chaiwo mamiriro.
Kurumidza. Kutenda kuBitcoins isu tinokwanisa kutumira uye kugamuchira mari zvinokurumidza kubva kana chero kupi zvako pasi.
Zviripachena kwete chete pasirese, uye mashoma masangano ezvemari, ari kutsigira kukurumbira kwemari iyi, kunyanya nekuti haina nzira yekusvika nekuidzora.
Kugadzikana. Kubva payakazvarwa, Bitcoins yasvika pamanani anodarika chiuru chemadhora pachikamu, uye mazuva anotevera vane kukosha kwemazana mashoma emadhora. Izvo zvese zvinoenderana nekushanda uye vhoriyamu yeBitcoins iri kufamba panguva iyoyo.
Kuzivikanwa. Chokwadi kana iwe ukabvunza mumwe munhu anozivikanwa nezve bitcoins uye asiri kunyanya mune tekinoroji, ivo vanokuudza iwe kana iwe uri kutaura nezve chinwiwa chesimba kana zvimwe zvakafanana. Kunyangwe hazvo mabhizinesi mazhinji uye makambani makuru ari kutanga kutsigira mari iyi, pachine nzira refu yekufamba isati yagona kuve mari yezuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Technology » Bitcoin, chii icho, inoshanda sei uye kupi yekutenga Bitcoins
Cryptocurrencies inoenderana ne "peer kune peer" system (kubva kumushandisi kuenda kumushandisi) iyo yakaita kuti zvikwanise kuputsa nematambudziko enzira dzekare dzekubhadhara: kudiwa kwechitatu bato.
Pamberi pekugadzirwa kwe cryptocurrencies, apo iwe waida kubhadhara online, waifanirwa kuenda kumapuratifomu akadai seMabhangi, Paypal, Neteller, ... nezvimwe kubhadhara.
Iine iyo cryptocurrency Bitcoin izvi zvachinja sezvo zvisiri zvakafanira kuve nechero muviri kuseri kweiyi yemahara mari, iri network pachayo inogadzirwa nevashandisi (zviuru zvemakomputa kutenderera pasirese) vanove nechokwadi chekutarisa, kutonga uye kunyoresa kwema.
Satoshi Nakamoto akadaro
Mr. Craig Wright, uyu haasi Satoshi. Uyu murume aive akavarairwa achigamuchira imwe yeakaoma dhiraivha andaishandisa.
Iyo Finney Transaction, chiitiko chandakaita kubva pc yangu, Core 2 Duo ine 2gb yegondohwe uye 80 hard disk, apo ini ndakadonhedza mu9-sheet Pdf yeBitcoin, pamwe chete nekuenzanisa kwemutemo waMoore, kune yangu laptop .
Yakanzi Transaction yakaitwa kubva pc yangu kuenda kune Acer Aspire laptop, uye iyo 2,5 hard drive yeiyo yakati laptop yakatumirwa kwairi, nekuda kwekukanganisa. Hukama hwangu nemurume uyu hwaive husiri hwakawanda kupfuura hwekutengesa, ini handimuzive, kana kuziva izvo zvaari kuronga, kana chinangwa cheiyi nyaya yese.
Kutakurwa kweFinney ndiko kwekutanga bvunzo yandakaita, kuburikidza ip uye nechiteshi 8333 chakabudirira. Ini naFinney takavharidzira kuendesa faira uye nekutengesa kuronga musangano.
Ichi ndicho chimwe chechokwadi nezvakavanzika zvandazivisa kwauri nhasi.
Nhasi, ndichagara ndisingazivikanwe, asi panguva ino kusiyana nemakore achangopfuura, ndinogamuchira kutaura.
Pindura kuna Satoshi Nakamoto
Jaime Noble akadaro
ZVINOKOSHA: kuSpain, shandisa LiviaCoins.com kutenga kana kutengesa bitcoins. Inokurumidza uye yakapusa
Pindura Jaime Noble
Microsoft inoda kuti 3,5mm jack idzokere kune mafoni
Inoita Apple Chiso ID Musiyano Pakati Pemahama? Pamwe kwete